तपाईलाई थाहा छ – साँझमा के गर्ने, के नगर्ने ? (टिप्ससहित) « Lokpath
२०७७, १४ माघ बुधबार १८:०२
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ माघ बुधबार १८:०२
काठमाडौं – कहिलेकाहिँ मानव जाति आफ्नै कारणले दुख झेल्न बाध्य हुन्छ । किनकी उसलाई आफूले गरेको राम्रो – नराम्रो कुराबारे खासै ज्ञान हुँदैन । तर यहाँ शास्त्रले भनेका केहि कुराहरु प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् तपाईको लागि राम्रा दिनहरु आउन सक्छन् । के हुन् तयस्ता काम जुन घरमा साँझ गर्दा असाध्यै शुभ हुन्छ ।
-घाम डुब्न लाग्दा सरसफाई गर्नुहोस् । माटोको घर छ भने साँझमा सफा हुनेगरी लिपपोत गर्दा पनि राम्रो मानिन्छ ।
-मनोरम वातावरण /भजनकिर्तन
-परिवारका सदस्यबीच छलफल, सरसल्लाह, कुराकानी ।
-रातको आठ बजे गावै रातको खाना खाएर १० बजेअगाडी सुतिसक्नुहोस् । बरु विहान सबेरै उठ्दा स्वास्थ्यको लागि पनि र घरको लागि पनि राम्रो शुभ हुन्छ ।
साँझमा गर्नै हुन्न यस्ता कर्म :
हुन त तपाईलाई लाग्ला काम गर्ने पनि समय हुन्छ र ? तर हाम्रो धार्मिक मान्यताअनुसार हामीलाई कुनै विशेष समयमा केही काम गर्न बर्जित गरिएको छ। साँझको समय अर्थात् जब सूर्यास्त हुन्छ, त्यतिबेला केही काम नगर्न मनु संहिताले भनेको छ । के हुन् ति काम ?
साँझपख सुत्नु हुँदैन : मनु संहितामा सन्ध्याकालमा सुत्न नहुने कुरा उल्लेख छ । साँझपख सुत्नाले तपाई /तपाईको परिवारमा गरिबी मात्रै हैन, रोगी र अल्पायू पनि हुने उल्लेख छ । नङ काट्ने, कपाल काट्ने, कपाल कोर्ने, कानेगुजी झिक्ने जस्ता कामहरु पनि साँझ परेपछि गर्न हुँदैन ।
साँझको समय शारीरिक सम्बन्ध राख्नुहुँदैन : धर्मशास्त्रहरुले निषेध गरेका कतिपय कुराहरु यदी हामीले जानेर नजानेर गरेमा त्यसले नोक्सानी गर्छ । यो समय घरको वातावरण सफा सुरम्य बनाई धार्मिक र पवित्र धुनहरु बजाएर शान्त रहन दिनुहोस् ।तर यो समयमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई राम्रो मानिँदैन ।